WAR DEG DEG:Gudoomiyihii Waaxeed Ka Tirsan Degmada Xamarweyne Oo Caawa la dilay
March 31, 2018 F.G 0
Kooxo Hubeysan ayaa goor dhow weerartay masuuliyiin ka tirsan Maamulka Degmada Xamarweyne ee Gobolka Banaadir, Waxaana jira Khasaare dhimasho iyo dhaawac. Weerarka ayaa waxaa lagu dilay Maxamud Macalin Xasan (Fagaase) oo ahaa gudoomiyahii waaxda Kacaan ee degmada Xamar Weyn, Sidoo kale waxaa la dhaawacay Xasan Indho Buux oo isna ah Gudoomiye laameed katirsan Maamulka degmada Xamarweyne, Sidaas waxaa xaqiijiyay masuuliyiin katirsan Xamarweyne. Kooxihii Bistooladaha ku hubeysanaa ee weerarka geystay ayaa durbadiiba meesha isaga cararay, Waxaana soo gaaray goobta uu dilka ka dhacay Ciidamada Degmada, Waxeyna halkaasi ka sameeyeen baaritaano aan la soo sheegin wax dad ah oo ay ku soo qabteen. Marxuum Fagaase oo dhaawac daran marka hore soo gaartay ayaa loola cararay Xarumaha Caafimaadka, waloow uu ugeeriyooday Rasaasta qeybta sare ee Jirka ka haleeshay, Sidoo kale waxaa haatan xaaaladiisa Caafimaad Lala Tacaalayaa Ruuxii Kale La Socday. Majirto Wali Cid Sheegatay Masuuliyada Toogahsada, Waloow Dilalka Noocan Oo Kala ah Looga Bartay Al-Shabaab .
Dagaal Xoogan Oo Khasaaro Geystay ayaa Ka Dhacay Gobolka Hiiraan
Warbixino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal Ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM iyo Al-Shabaab ku dhexmaray duleedka Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan. Dagaalka ayaa yimid kadib markii Ciidamo isugu jira Itoobiyaan iyo Jabuuti oo labaduba ka mid ah Ciidamada AMISOM ay Wadada u galeen rag ka tirsan Al-Shabaab,waxana halkaasi mudo ka socday dagaal Saacado qaatay. Dadka Ku Nool Duleedka Bari ee Degmada Baladweyne Oo aan La Hadalnay ayaa waxa ay sheegeen in ay Maqlayeen hubka la isku adeegsanayay dagaalkaas,isla markaana ay cabsi soo wajahday. Weli khasaaraha ka dhashay dagaalkaas kama hadlin saraakiisha Ciidamada dowladda iyo masuuliyiinta Maamulka Hir-Shabeelle ,balse Al-Shabaab ayaa Warar ay ku qoreen baraha Internetka waxa ay ku sheegeen in dagaalkaas ay ku dileen Afar Askari.
Xiriirka Kubadda Cagta Talyaaniga Oo isbadalo Ku Sameeyay Kulamada Horyaalka
Maamulka horyaalka talyaaniga ayaa ku dhawaaqay isbadal lagu sameeyay balse waxa ugu weyn ee la ogaaday waa xiliga kulanka Juventus iyo Napoli ay ciyaari doona isbuuca 34-aad, waxaana la ciyaari doonaa 22-ka April. Hadii Bianconerri ay uso baxdo wareega Semi Final-ka koobka waxaa loo badali doonaa maalinta sabtida ah si ay kooxda u hesho waqti badan oo ay isugu diyaarineyso kulamada dhici doona 24-ka ama 25-ka. Hadii ay sidaas dhacdo kulanka Ac Milan iyo Benevento ayaa loo badali doonaa oo laga dhigi doonaa maalinta Axadda. ISBADALKA LA SAMEEYAY: Isbuuca 34-aad: Spal-Roma – 14.00, Saturday April 21 Sassuolo-Fiorentina – 17.00, Saturday April 21 Milan-Benevento – 19.45, Saturday April 22 Cagliari-Bologna – 11.30, Sunday April 22 Juventus-Napoli – 19.45, Sunday April 22 Genoa-Verona – [Sii aqri]
Dowlada Soomaaliya Oo Guddi U Magacaawday Xiisada Magaalada Balad Xaawo
Guddiga Arimaha Dibedda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ee golaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa xarunta wasaaradda Arrimaha Dibadda kula kulmay Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya, Waxaana kulankaasi wasiirka uu warbixin guud ka siiyey guddiga howlaha shaqo ee wasaaradda iyo arrinta Balad Xaawo oo uu ka taagnaa muran la xiriira dhinaca Xadka. Mudane Axmed Ciise Cawad ayaa u sheegay guddiga in la hakiyey dhismaha darbiga laga dhisayey Balad Xaawo, maadaama arrintaasi uu hakiyey madaxweynaha dalka oo ay wada hadleen dhiggiisa dalka Kenya, howlaha wasaaradduna ay u socdaan si wanaagsan. Gudoomiyaha Guddiga Arimaha Dibadda, Qorsheynta, Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Golaha Aqalka sare Sanatar C/risaaq Cismaan Jurule ayaa kulanka kadib sheegay in wasiirka uu si faah faahsan ugu sharaxay guddiga howlaha socda, islamarkaana ay ku qanceen. “Wasiirka waxa uu faah faahin naga siiyay howlaha wasaaradda, waxaana si buuxda iskula garanay wada shaqaynta Guddiga iyo Wasaaradda oo aan ku qanacnay howsha ay dalka u heyso”ayuu yiri Sanatar Jurule. Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad ayaa isna dhankiisa sheegay in arrinta Balad Xaawo si gaar [Sii aqri]
Madaxweeyne Muuse Biixi Oo Yiri”Weerar Adag Ayay Nagu Soo Qaaday Dowlada federaalka”
Madaxwaynaha Maamulka Somaliland Muuse Biixi ayaa Shir jaraa’id ku qabtay magaalada Hargeysa waxaana uu sheegay in Dowlada Soomaaliya ay dagaal kula jirto heshiisyada ay Somaliland la gashay dowlada Imaaraatka Carabta iyo shirkada DP World ee lagu wareejiyay maamulka dekada Berbera. Muuse Biixi waxaa uu tilmaamay in qoraalka ay dowlada federaalku u gudbisay qaramada midoobay aanay ahayn mid ay kaga cabanayso Imaaraatka balse ay Somaliland uga dan leedahay si heshiisyada looga noqdo. “Xukuumada Xamar ka dhisan waxay si bareera ah ugula jirtaa heshiisyada aynu galno, waa niman aan ogoleyn inaad shaqeysato” ayuu yiri Madaxweynaha Somaliland. Madaxwayne Biixi waxaa uu kale oo uu sheegay inay beesha caalamka u gudbiyeen qoraalo ay kaga jawaab celinayaan codsiga dowlada federaalku u gudbisay jimciyada quruumaha ka dhaxeyso. Wax aan loo dul qaadan karin ayuu ku tilmaamay faro galin uu sheegay inay dowladu federaalku ka dhex Wado deegaanada Somaliland ka taliso. “Lama qaadan karo waxay wadaan nimankaasi waynu kala go’nay oo howsheena ayaanu wadeynaynaa, 100 sano ee soo socda waxay wadaa dowlada federaalku waa dhibaato ay dhex dhigtay jiilasha soo koraya” ayuu [Sii aqri]
DHAGEEYSO:Xildhibaan Abuukaate Oo Yiri”Waan Soo Dhaweeynaynaa Hakinta Kulankii Barlamaanka”
Xildhibaan Maxamuud Abuukaate Oo Ka Mid ah Xildhibaanada golaha Shacabka Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay Go’aankii madaxweyne Farmaajo uu ku hakiyey kulankii Golaha Shacabka Soomaaliya ee Maanta lagu balan sanaa. Xildhibaanka ayaa sheegay in tallaabada uu kulanka ku hakiyey Madaxweeyne Maxamed Farmaajo uu yahay mid wanagsan oo u baahan in la taageero maadaama Maanta dadku ay ka cabsi qabeen in kulanka uu noqdo mid fowdo ku soo dhamaada. Sidoo kale Waxa uu sheegay in Madaxweyne Maxamed Farmaajo uu daacad ka noqon doono isla markana si kalsooni leh uu u dhexgalo khilaafka Golaha Shacabka, si xal buuxa looga gaaro khilaafka. Kulankii Golaha Shacabka ee Maanta la hakiyey ayaa dad badan waxa ay aamin sanaayeen in hadii uu qabsoomo ay ka dhalan karto fowdo basle Madaxweyne Maxamed Farmaajo uu dalbaday in la Hakiyo.
Dhibane Xaashi Cumar Oo Maxkamada Roma Saddex Milyan Eurou U Xukuntay
Xaashi Cumar Xasan oo ah Muwaadin Soomaaliyeed oo muddo dheerna ku xernay dalka Talyaaniga ayaa Maxkamad racfaanka magaalada Perugia ee dalkaasi waxay u xukuntay lacag magdhow ah oo gaareysa 3.181 Milyan oo Euro kadib sanooyin si qalad ah oo u xirnay darteed. Maxkada ayaa sheegay Xaashi Cumar Xasan in lagu waayay dambigii mudda dheer uu xabsiga ugu jiray islamarkaana uu u ahaa eedeysane. Xaashi Cumar ayaa lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay ama uu ku lug lahaa dilkii loo geystay wariyaasha kala ah, RAI Ilaria Alpi iyo sawir qaade Milan Hrovatin oo lagu diley magaalada Muqdisho sanadkii 1994tii. Bishii October sanadkii 2016 ayaa Xaashi laga daayay Xabsiga kadib markii qareennadii u doodayay ay ku guuleysteen in dambi lagu waayo. Alpi, oo 32 jir ahayd iyo Hrovatin, oo 45 jir ahaa ayaa Gaari ay wateen waxaa weerar ku qaaday Malleeshiyo hubeysan March 20, 1994, kuwaas oo xilga weerarka lagu qaadayay marayay bartamaha Magaalada Muqdisho. Wariye RAI Ilaria Alpi ayaa Soomaaliya u tagtay si ay u baarito eedeymaha sheegaya, in shirkaddo laga leeyahay dalka Talyaaniga ay qayb ka [Sii aqri]
Madaxweyne Gaas Oo Ka Guddomay Iscasilaadii Taliye Ku Xigeenkii Ciidanka Daraawiishta
Madaxweynaha Maamulka Puntland, Cabdiweli Gaas ayaa aqbalay iscasilaada taliye ku xigeenka ciidanka Daraawiishta Puntland, Sareeyo Guuto Dayr Xaaji Aadan, kaasoo bartamihii bishaan March gudbiyay istaqaaladiisa.
Maxay Kaga wada Hadleen Taleefoonka Gollaha Maamul Goboleedyada Dalka?
Golaha Iskaashiga maamul Goboleedyada ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa in kulan deg deg ah ay ka yeeshaan khilaafka ee ka dhax taagan Golaha Shacabka ee Barlamaanka Soomaaliya kaas oo u muuqda mid mugdi lugaha la sii galaya. Golaha ayaa la filayaa in khilaafkaas ay ka soo saaaraan Go`aamo iyo in ay muujiyaan sida ay u arkaan khilaafka sida ay tilmaamayaan Xaaladaha xubnahaan ayaa waxaa ay ku wada hadleen Qadka taleefoonka, iyagoona wax badan iska weydiiyay khilaafka siyaasadeed ee u dheexeya Golaha Shacabka iyo sidii Xal looga gaari lahaa, maadaama Xaalada ay sii xumaanayso. Golaha Iskaashiga maamul Goboleedyada ayaa waxaana la filayaa in ay soo gaaraan magaalada Muqdisho si ay kulamo gooni gooni ah ula qaataan labada dhinac ee khilaafka uu ka dhax taagan yahay. Iyadoo Maanta lagu waday in uu qabsoomo kulankii Barlamaanka ayaa u baaqday soo jeedin ka timid Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo Maadaama labada dhinac midna uu yiri Mooshinka Wuu buray, midka kalana uu sheegay in uusan burin Mooshinkaasi ayaa leysla gartay in maanta uusan dhici Karin kulanka Barlamaanka iyada oo laga [Sii aqri]
Guddoomiye Jawaari Oo Sheegay Sababtii Loo Joojiyay Kulankii Baarlamaanka ee Maanta
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo goor dhow la hadlay Warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay sababtii keentay in maanta la hakiyo kulankii Baarlamaanka. Sidoo kale Waxaa uu sheegay in Guddoomiye Jawaari in isaga iyo labadiisa ku xigeen ay la kulmeen Madaxweynaha Soomaaliya, islamarkaana ay ku heshiiyeen in kulanka la baajiyo. Guddomiye Jawaari ayaa sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya uu ka codsaday in la baajiyo kulanka, maadaama ay jirto kala aragti duwanaan ka dhex jirta Xildhibaanada. Sidoo kale waxaa uu xusay in la dhameyn doono Khilaafka ka dhex taagan Xildhibaanada Golaha Shacabka. Dhinaca kale Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay kulan la qaatay Guddoonka Baarlamaanka Soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay uu khilaaf ka dhex taagnaa. Madaxweynaha ayaa kala hadlay Guddoonka sidii loo hakin lahaa Khilaafka xooggan ee ka dhex taagan Xildhibaanada Golaha Shacabka. Kulanka Madaxweynaha uu qaatay Guddoonka Baarlamaanka ayaa sidoo kale waxaa joogay Guddoonka Aqalka Sare